Blog of Nyein Chan Yar: 2009.02
ဒီBlog အသစ်မှာတော့ မြန်မာစာကို Unicode standard နဲ့ ပိုကိုက်ညီတဲ့ font ကိုပဲ သုံးပါတော့မယ်။ အရင်ကတည်းကလည်း zawgyi-one သုံးချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းကfont ကိစ္စတော်တော် စဉ်းစားခဲ့သေးတာ။ myanmar1 စထွက်တော့ စာလုံးက လုံးဝမလှတာရယ် စာရိုက်ရတာ အဆင်မပြေတာရယ်၊ final မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာရယ်တွေ ကြောင့် မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပိတောက်ကတော့ Linuxအတွက်ကောင်းပြီး windows မှာ browser ရွေးလို့။ ဒါနဲ့ zawgyi-one ကိုတော့ အများက သုံးနေတော့လည်း သုံးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ zawgyi-oneကို popular ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ planet website ပဲထင်တယ်။ သူက အဲဒီကာလ မြန်မာ website ထဲမှာ နံပါတ်တစ် ဆိုတော့ လွှမ်းမိုးမှု ရှိတာပေါ့လေ။ zawgyi-oneက စာလုံးလှတော့ အများသုံးလို့ရတဲ့ အခြေအနေကို ချက်ချင်း ရောက်သွားတယ်။
အခု ဒီစာကို padauk နဲ့ရိုက်ထားပေမယ့် myanmar3တို့ myMyanmarတို့ နဲ့လည်း ဖတ်လို့ရပါတယ်။ (compatible ဖြစ်တယ်ပေါ့။) တကယ်ဆို အခု ကျွန်တော် padauk font ရွေးပြီး myanmar3 ကပေးတဲ့ keyman keyboard နဲ့ရိုက်ထားတာပါ။ နဲနဲ အူကြောင်ကြောင် နိုင်ပေမယ့် padauk ကိုနဲနဲပိုလှတယ် လို့ထင်ပြီး input အတွက် myanmar3 keyboard နဲ့ အဆင်ပြေနေလို့ပါ။
Here are how these fonts look like on my pc...
Padauk font download
Download Myanmar3 Unicode font.
နောက်တစ်ခုကတော့ မြန်မာ font converter လေးပါ။ font အမျိုးအစား အစုံကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ I'm very greatful to those who made it. :)
Posted by dathana at Friday, February 27, 2009 No comments:
ဟိုတလောက RSS feedတွေ twitter feed တွေထဲမှာ တစွန်းတစတော့ တွေ့ဖြစ်လိုက်တယ်။ ခေါင်းစဉ်လောက်ပဲ ကြည့်ပြီး စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပြီး ကျော်သွားခဲ့လိုက်တာ အခု ကလိုစေးထူး ဖတ်ကြည့်မှပဲ ဒီလောက်တောင်ပဲလားလို့ အံ့ဩရတယ်။ ဟာ... အဲဒီလောက်တောင် သီချင်းစာသားက အောက်တန်းကျတာ ကမ်းကုန်တယ်။
ဆိုးတာက ဒီလိုသီချင်းကို ရှုတ်ချရကောင်းလား ဆိုပြီး ဆောင်းပါးရေး၊ blog ရေးကြတာတွေပဲ။ blog တစ်ခုရဲ့ခေါင်စဉ်ကို တွေ့လိုက်သေးတယ် ဘာတဲ့ မြန်မာတွေက လွတ်လပ်မှု ကိုလက်မခံဘူး ဆိုလား ဘာဆိုလား ပါပဲ။ အဲဒီလိုပြောတဲ့လူတွေဟာ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပရမ်းပတာ လုပ်ချင်တာလုပ်တာ လို့ ထင်နေပုံရပါတယ်။ "စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်း တကယ်ဆို လိုအပ်ပါတယ်။ နအဖ
သုံးတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ရမယ်လို့တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ နအဖကိုသာ ဒီစကားလုံးကို မတန်မရာ မသုံးနဲ့လို့ ပြောရမှာ။
ထားပါတော့။ ကလိုစေးထူး ရေးထားတာ ပိုပြည့်စုံတာမို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ http://klosayhtoo.blogspot.com/2009/01/vs.html
Posted by dathana at Wednesday, February 25, 2009 No comments:
Posted by dathana at Monday, February 23, 2009 No comments:
For this blogger.com and blogspot.com domains are banned in Burma, I'm startinganew blog on wordpress platform. For the time being, I closed comments on this blog. You know, these days I'm getting spam commentsalot. Strange that spammers can overcome the word verification. Yesterday, I got 107 spam comments within an hour.
Anyway, I'll post the new blog URL when confirmed. I want to make sure the hosting I chose is stable and reliable. So, please don't forget me. I'll be back.
From Nyein Chan Yar with love,
Posted by dathana at Friday, February 06, 2009 No comments: